शीर्षक यो लेख “पोशाक नाजुक हालत: 'यो एउटा भ्रम हो. तर सबै कुरा 'एक भ्रम छ” न्यूयोर्क मा जेसिका Glenza द्वारा लेखिएको थियो, लागि theguardian.com शुक्रबार 27th फरवरी मा 2015 22.41 UTC
यो एक मेम इंटरनेट संस्कृति को गोवर बाहिर र दैनिक मान्छे को चेतना मा नजान लागि एक दुर्लभ उपलब्धि हो. यो "पोशाक" जत्तिकै छिटो हुन्छ विशेष गरी जब गरे.
बिहीबार साँझ र शुक्रबार बिहान बीच, पोशाक द्वारा एक Tumblr पोस्ट देखि वृद्धि एक आइरिस संगीतकार एक अन्तर्राष्ट्रिय घटना र विषय बहस दुनिया भर.
पोशाक प्रश्न को जड, र सायद यसको अपील, सरल छ: यो frock सेतो र सुन छ, नीलो र कालो वा?
घटना एक सरल अप्टिकल भ्रम को परिणाम हुन सक्छ, एक अस्पष्टता, वा यो अझ जटिल हुन सक्छ. कारण जेसुकै होस्, यो पनि धारणा अनुसन्धानकर्ताहरूले मा सहमत गर्न सक्छन् कि एक फोटो छ.
"हाम्रो दृष्टि र श्रवण त्यसैले धेरै साँच्चै सही छ,"हावर्ड सी Hughes भने, जो मनोवैज्ञानिक र मस्तिष्क विज्ञानको डार्टमाउथ कलेज विभाग मा धारणा तंत्र जांच. "त्यसो होइन भने, हामी ढोकाबाट हिंड्न सकेन, र हामी पक्कै चलान सकेन 50 गज र केन्द्र क्षेत्र मा एक फ्लाई बल पक्रन। "
छोटकरीमा, तिमी पागल हुनुहुन्न: तपाईं देख्न धेरैजसो अन्य मानिसहरूलाई देख्न के छ. तर Hughes हामी "देख्न" वस्तुहरु जरूरी हामी बुझ्न मौलिक गुणहरू छैन भनी हामीलाई सम्झाउँछ, हामी सीमित जानकारी काम गरिरहेका छौं विशेष गरी, यस्तो दानेदार रूपमा, दुई-आयामिक फोटो.
ती तस्बिरहरू हाम्रो आँखा सङ्कलन डाटा माथि चबाया र हाम्रो मन मा reassembled हो, जटिल जैविक र मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाहरु को माध्यम ले रचना.
"त्यो सिर्जना, मलाई लाग्छ, भावना कि … हामी अझै बाहिर त्यहाँ के छ हेर्न,"उहाँले भन्नुभयो. मस्तिष्क कि निर्माण गर्न छ - - "तर हामी निर्माण गर्न छ र तिमीहरूलाई हेर्न आँखा आवश्यकता एक मामुली तरिकामा महसुस गर्न छ, तर तपाईं बुझ्न एक मस्तिष्क आवश्यकता, र यति छ कि धारणा उत्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। "
पोशाक नाजुक हालत रंग केन्द्रित, छैन "वास्तविक" प्रति देखि छ कि एक धारणा. रंग को अनुभव दृश्य प्रकाश रे को लम्बाइ धारणा एक सतह देखि परिलक्षित छ, आँखा मानव तीन प्राथमिक रंग को रूपमा व्याख्या.
उदाहरणका लागि, के हामी लाल "रूपमा हेर्न,"एक वस्तुको मूलभूत गुणवत्ता छैन. बरु, यो परिलक्षित प्रकाश को मानिसहरूले 'उल्लेखनीय सापेक्षिक रूपमा समान धारणा छ. अनि मानिसहरूले भन्दा धेरै फरक छ धेरै रंग अनुभव कि जनावरहरू प्रशस्त छन्. यो mantis shrimp को आँखाहरु, उदाहरणका लागि, छ 12 रंग रिसेप्टर्स मानिसहरूले 'तीन तुलना.
अनि प्रश्न inconsequential लाग्न सक्छ, जबकि, मस्तिष्क विज्ञान सबैभन्दा अध्ययन क्षेत्र केही बनाउने निर्माणों - धेरै चित्र मानव जीव र धारणा परस्पर को एक आकर्षक उदाहरण हो भन्ने महसुस गरेका छन्.
"विचार साँच्चै अविश्वसनीय प्रक्रिया कि कसैले को सबै विस्तार कि कुनै कारण छैन, पूर्णतया व्यक्तिगत मतभेद छैन बुझ्नुहुन्छ,"Hughes भने. "अब, यस छवि दुखाइ स्पष्ट बनाउन यस्तो अचम्मको काम गरेको छ कसरी - म निश्चित छु. तर म कारण यो हामी सबै भन्दा हामी वहाँ बाहिर के छ हेर्न विचार छ मान्छे बीच यति धेरै गर्मी उत्पन्न लाग्छ। "
Hughes विषय झन् अनुसन्धान गरिनेछ भन्नुभयो, र नीलो-सेतो घटना विषम trichromats देखि केहि को परिणाम हुन सक्छ भनेर धारणा (प्राथमिक रंग को अलि फरक धारणा छ, जो मान्छे) एक गर्न (धेरै गाह्रो) अप्टिकल भ्रम साटेर, कहिलेकाहीं अस्पष्टता भनिन्छ.
प्रयास गरेको छ जो कोहीले पनि हटाउने उत्तल र अवतल सर्कल तालिम, वा एक कताई भक्तपुरको यस्ता केही तस्बिरहरू फ्लिप गर्न कति गाह्रो एक विचार हुनेछ, वा "disambiguate".
अर्को धारणा शोधकर्ता. रबर्ट Fendrich, उहाँले बिहीबार साँझ सुन-सेतो पोशाक देखे Hughes भन्नुभयो, र शुक्रबार बिहान नीलो-कालो, जो एक छवि reorient गर्न सक्षम मान्छे को एक अल्पसंख्यक देखिन्छ. Fendrich डार्टमाउथ कलेज मा एक भ्रमण विद्वान्ले छ, पनि मनोवैज्ञानिक र मस्तिष्क विज्ञान विभाग मा.
क्यालिफोर्निया बर्कले विश्वविद्यालयका विटने धारणा लागि प्रयोगशाला र लडाई मा, यो निष्कर्ष को एक अस्पष्टता छ - दाऊदले विटने मूर्तिको प्रभाव सरल छ भने.
"तपाईं ज्योति सीधा पहिरन मार छ अनुमान, र म ज्योति पहिरन पछि देखि आउँदै छ कि अनुमान,"विटने भने. "यो एक साँच्चै सरल फरक तल फोडे, र यो एक साँच्चै सरल अस्पष्टता छ। "
"यो एउटा भ्रम हो,"विटने भने. "तर सबै कुरा एक भ्रम छ।"